कसरी व्यवसायहरू प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको साथ कुराकानी गर्ने हुनुपर्छ Martech Zone
मेरो मिडिया को मेरो राय अक्सर मेरो उद्योग मा ती भन्दा फरक छ। सैद्धान्तिक रूपमा, मलाई सामाजिक मिडिया र अवसर मन पर्दछ यसले व्यक्तिगत स्तरमा ग्राहकहरू र सम्भावनाहरूसम्म पुग्नका लागि व्यवसायहरू प्रदान गर्दछ। यद्यपि वास्तविकता धेरै फरक भएको छ।
मैले व्यवसायहरूलाई सामाजिक मिडियाको उपयोग गर्न कोशिस गरेको देखेको छु जुन उनीहरूले अन्य मार्केटिंग च्यानल गर्दछन्। केहि अवस्थाहरूमा, यसले अविश्वसनीय समाहित भएको छ ... रोभोटिक प्रतिक्रियाहरूले सामान्यतया जान्न सक्ने सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्तालाई गरेको ब्रान्डलाई क्षति पुर्‍याउँछ, उनीहरूले यसलाई मद्दत गर्दैनन्। अन्य समय, यो कि ब्रान्डले सार्वजनिक फोरममा मुद्दा सुल्झाउने अवसर देख्दैनन्, उनीहरूले गर्न सक्ने राम्रोको एम्प्लीफिकेशन प्रदान गर्छन्।
आजको विश्व बजारमा, यस्तो व्यवसाय जहाँबाट व्यवसायहरू संसार भर स्मार्टफोनको औंलाको स्वाइपमा उपलब्ध छन्, तपाईंको अनलाइन उपस्थिति पहिले कहिल्यै बढी महत्त्वपूर्ण भएको छैन। तपाइँ आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु को लागी उभिनु पर्छ, प्रश्न र प्रश्नहरु को लागी उपलब्ध हुन को लागी र तपाइँको ग्राहकहरु संग एक जडान बनाउनु छ कि तिनीहरूले तपाइँको सेवा बारम्बार प्रयोग गर्नेछन्। यदि तपाइँ यो सहि गर्नुहुन्छ भने, त्यो गर्नको लागि उत्तम स्थान सोशल मिडियामा छ।
टोलफ्री फारवर्डिंग डॉट कॉमले उचित रूपमा आफ्नो भर्खरको इन्फोग्राफिकको नाम राखेको छ, सामाजिक मीडिया व्यवसाय शिष्टाचार। मलाई उनीहरूको शब्दको प्रयोग गर्न मन पर्छ शिष्टाचार बरु रणनीति, योजना, वा गाईड भन्दा। शिष्टाचारको परिभाषा हो समाजमा वा कुनै विशेष पेशा वा समूहका सदस्यहरूका बीच शिष्ट व्यवहारको परम्परागत कोड। Boom! त्यहाँ सामाजिक व्यवसायमा कसरी मोनिटर गर्ने, प्रतिक्रिया गर्ने, र उनीहरूको प्रबर्धन गर्ने एक आशा छ - र यो इन्फोग्राफिकले यसलाई परिभाषित गर्नमा ठूलो काम गर्छ।
फेसबुक - तपाईको फेसबुक पेज मार्फत प्रत्येक अनुरोधमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा जवाफ दिनुहोस्। ह्यासट्याग प्रयोग नगर्नुहोस्, ती प्लेटफर्ममा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिदैन।
इन्स्टाग्राम - कथाहरू निजीकृत गर्नका लागि प्रयोग गर्नुहोस्, पर्दा पछाडि तपाईंको व्यवसायमा हेर्नुहोस्। तपाईको ब्रान्डि consistentमा लगातार रहनुहोस्, फिल्टरहरू लागू गरियो, र प्रभावी रूपमा ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
twitter - एक सामाजिक मिडिया प्रकाशन प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुहोस् हाम्रो प्रायोजकहरू, Agorapulse, अनुसूची गर्न, लामबद्ध गर्न, र तपाईंको ट्वीट्सको रिलीज अनुकूलन गर्न। अटोरेस्पोन्डरबाट टाढा रहनुहोस् र ट्रेंडि topics शीर्षक र ह्यासट्यागसँग प्रतिक्रियाशील हुनुहोस्।
Youtube - अनुकूलन थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्, शिर्षक कार्डहरू थप्नुहोस्, र तपाईंको च्यानलमा सदस्यताहरूलाई ओभरले र एक आपसमा जडान गरिएका भिडियोहरू मार्फत प्रोत्साहन गर्नुहोस्।
Pinterest - तपाईंको समुदायसँग संलग्न हुनका लागि अन्य प्रयोगकर्ताहरू र प्रभावकर्ताहरूबाट सामग्री पिन गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट का सबै छविहरू सजिलै pinnable छन् - एक Pinterest जोड्नुहोस् पिन यो टांक।
LinkedIn - स्वचालित रूपमा तपाईंको मार्केटिंग ईमेलमा कनेक्शन सदस्यता लिनुहोस्। प्लेटफर्ममा तपाईंको विश्वसनीयता र प्रभाव निर्माण गर्न सान्दर्भिक उद्योग सामग्री साझा गर्नुहोस्।
यहाँ महान इन्फोग्राफिक छ, सामाजिक मिडिया व्यापार शिष्टाचार: कुन प्लेटफर्महरू उपलब्ध छन्.
टैग: ब्रान्डिङव्यवसाय शिष्टाचारशिष्टाचारफेसबुकफिल्टरहरूhashtagsइन्स्टाग्रामLinkedInपिनPinterestसामाजिक मिडिया शिष्टाचारप्रचलन शीर्षकहरूtwitterYouTube